Enweghị mgbanwe na UNWTO: Zurab Pololikashvili kwadoro dị ka odeakwụkwọ ukwu 2022-2025
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Enweghị mgbanwe na UNWTO: Zurab Pololikashvili kwadoro dị ka odeakwụkwọ ukwu 2022-2025
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • WTN
Okwu n'ime usoro ntuli aka kacha arụ ụka na akụkọ ihe mere eme nke World Tourism Organisation (UNWTO), ma ọ bụ ikekwe votu kacha esemokwu na usoro United Nations kwubiri na Madrid Spain ihe dị ka elekere asaa nke abalị n'oge mpaghara, gịnị bụ nkeji ole na ole gara aga.
Mgbe mba 30 kpọrọ oku ka ha kwado mkpebi nke UNWTO Executive Council iji kwadoghachi onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO ugbu a. Zurab Pololikashvili maka okwu nke abụọ, na mgbe Costa Rica rịọrọ maka votu nzuzo iji nye mkpebi dị otú ahụ ka ọ dịkwuo arọ, a na-eme mkpebi a taa na nnọkọ ogologo oge n'ehihie a.
Abụọ odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO gara aga kwadoro nkwenye ahụ n'ihu ọha Ịdị mma netwọkụ njem nlegharị anya nke ụwa nke mkpọsa ntuli aka na ọtụtụ akwụkwọ ozi mepere emepe.
Taa Mr. Pololikashvili kwadoro. Mba 85 họpụtara ya, mba 29 kwadoro ya.
Zurab Pololikashvili bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Georgian, na-eje ozi ugbu a dị ka odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation. Site na 2005 ruo 2009 ọ bụ onye osote onye na-ahụ maka mba ofesi na Georgia, ma bụrụ onye nnọchi anya Spain, Morocco, Algeria na Andorra.
Executive Executive nke World Tourism Organisation – UNWTO mere mbipụta ya nke 113 na Spen n'okpuru ọchịchị nke ebube ya Eze Felipe nke Isii na Jenụwarị tozuru oke maka ntuli aka ọzọ maka onye odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili. A họpụtara ya ọzọ maka oge nke abụọ (2022-2025).
Maka nraranye Eze Felipe VI so Onye isi oche nke National Heritage Board of Directors so ya. Llanos Castellanos; Minista nke ulo oru, ahia na njem nlegharị anya, Reyes Maroto; Onye osote onye isi ala nke Republic of Uzbekistan, Aziz Abdukhakimov; Onye isi obodo Madrid, José Luis Martínez-Almeida; Secretary nke State for Global Spain, Manuel Muniz; onye ode akwukwo nke steeti maka njem nlegharị anya, Fernando Valdés; na ọtụtụ ndị nnọchiteanya.
Zurab Pololikashvili (amuru na Tbilisi na 12 Jenuarị 1977) bu onye Jojia n'isi ulo akwukwo. UNWTO kemgbe 1 Jenụwarị 2018. N'oge gara aga, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye nnọchi anya Georgia bi na Spain na nkwado nkwado Andorra, Morocco, na Algeria. E wezụga asụsụ Georgian ya, ọ maara nke ọma n'asụsụ anọ n'ime asụsụ ise dị na UNWTO, ha niile ma e wezụga Arabic.
Zurab chọrọ 2/3 nke votu na UNWTO General Assembly na-aga n'ihu na Madrid ka ekweta ya.
Onye isi oche netwọkụ njem nlegharị anya nke ụwa na onye mbipụta eTN Juergen Steinmetz na-ekwu, sị: “Ndị otu UNWTO ekwuola. Echere m na anyị nwere ndị mmeri n'abalị a. Nke a bụ votu ziri ezi n'abalị a. World Tourism Network na-alụ ọgụ iji nweta votu a ziri ezi, o kwubiri. "
"Ugbu a bụ oge iji soro UNWTO na ndị ndu ziri ezi na-arụkọ ọrụ. Anyị na-atụ anya nke a. "
"World Tourism Network dị njikere ịbụ olu ọzọ dị mkpa na-eduzi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, anyị dịkwa njikere isoro UNWTO rụọ ọrụ n'okwu ndị dị mkpa."